Ikhaya epulazini lomndeni - I-Airbnb
Ikhaya epulazini lomndeni
Inverness, Subd. A, Nova Scotia, i-Canada
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Anne
Ikhaya elincane elinakho konke epulazini lomndeni eceleni kwe-Margaree Heritage River. Indlu ilala abantu abayisithupha nekhishi elinakho konke futhi iphakathi nemizuzu engu- yamabhishi amahle, ama-Cabot links kanye ne-Cabot Trail. (Sicela ungafaki izilwane ezifuywayo)
Ikhaya elincane lesimanje elisepulazini elihle lase-Cape Breton eceleni kwe-Margaree Heritage River edumile emhlabeni. Indlu inamakamelo amabili okulala, ngalinye linombhede olala abantu ababili kanti igumbi lokuphumula linosofa ovulekayo olala abantu ababili. Ikhishi linakho konke okudingekayo.
Le ndawo enhle ingamakhilomitha angu-7 ukusuka emabhishi amahle anesihlabathi nemizuzu engu- ukusuka ku-Cabot Trail ne-Cabot links. Jabulela uhambo lwe-ski noma lwe-snowshoe ebusika, izikebhe entwasahlobo, imikhosi ehlobo noma imibala emihle yasekwindla.
Lena yindawo enhle kakhulu yomkhosi we-Celtic Colours International.
4.68 · 385 okushiwo abanye
Siphila epulazini elinokuthula futhi langasese elingama-acre angu-200 elinezindawo ezakhiwe ngamapulangwe, amasimu avulekile nemizila yamanzi. Omakhelwane bethu abaseduze baqhele ngamakhilomitha angu-1.
Siyatholakala uma kudingeka futhi sizimisele ukusiza ngokusikisela kokubuka indawo .
Hlola ezinye izinketho ezise- Inverness, Subd. A namaphethelo